Iwo akanakisa mabhuku epfungwa, iwo mazita aunoda muraibhurari yako | Zvazvino Zvinyorwa
Kutsvaga kwemakanakisa mabhuku epfungwa ndeimwe yeakanyanya kukumbirwa pakati pevaverengi vanotaura chiSpanish. Mushure mezvose, iri nezvesainzi yepfungwa; chirango chinobva mufilosofi uye chine chimiro chakarongeka chakadzokera muzana ramakore rechiXNUMX. Uye zvakare, iyi yazvino yakauya pamwe nehukama (ruzivo kuburikidza neruzivo), zvichitungamira mukudzidza kwehunhu hwevanhu.
Nekudaro - zvichienzaniswa nemamwe masayendisiti enharaunda - inzvimbo iripedyo yeruzivo (isina kudzikisira pairi mukana wekuenderana). Mazuva ano, psychology inobatanidza akati wandei madiki-ekuraira (kliniki, yemagariro uye yekuziva, pakati pevamwe), ayo akaongororwa zvinehunyanzvi mumabhuku akaratidzwa mundima dzinotevera.
1 Kutsvaga kweMunhu kune Chinangwa (1946), naViktor Frankl
1.1 Kupokana uye chimiro
2 Emotional Intelligence (1995), naDaniel Goleman
2.2 Maumbirwo, chinangwa uye mutauro
3 Psychologically kutaura (2016), naAdrián Triglia, Bertrand Regader naJonathan García-Allen
3.2 Kusimba kwesainzi uye mutauro
3.2.1 Iyo mbiri chinangwa chevanyori
4 Mamwe mabhuku akakurudzirwa epfungwa
Kutsvaga Kwemunhu Kune Chinangwa (1946), naViktor Frankl
Iri ibhuku rinotengwa zvakanyanya kuAmazon muchikamu chezvepfungwa, nekubvumirana pakati pevanyanzvi neruzhinji rwevanhu. Kwete pasina yakadudzirwa mumitauro inodarika makumi mashanu uye simba rayo guru rinozivikanwa (kunyanya muUnited States). Zvese izvi nekutenda kune hwakasimba uye hune tarisiro humbowo hwakaratidzwa nemunyori nezve murume akatarisana nezviitiko zvakanyanya.
Kupokana uye chimiro
Chiremba wePsychology V. Frankl akapatsanura bhuku rake muzvikamu zvitatu. Ivo vakarongeka zvinoenderana neruzivo rwavo mumusasa wevasungwa nazi pamwe nekutarisisa kwepfungwa dzevanhu. Muchikamu chekutanga chinotyisa chinounganidzwa yekusvika kumunda uye kushamiswa kwevakawanda pavanotambura nekushungurudzwa kwese kwese.
Saka kupokana kwe psyche kuri muchimiro chesarudzo pakati pekuzviuraya kana kuramba kusvika kumagumo, chero chii chinoitika. TOmamiriro ezvinhu akadaro anomuka padanho rakaipa sezvo risingafadzi: "munhu chinhu chinogona kujairira chero chinhu."
Tevere, muverengi anowana chikamu chechipiri achinongedzera kuhupenyu hwavo hwezuva nezuva mukati memunda. Kuti uite izvi, kuburikidza nenyaya dzakaoma dzinoratidza kufa kwemanzwiro. Nenzira imwecheteyo, chikamu ichi chinoratidza kushuvira kwekumba pamwe nekusava nesimba kunokonzerwa nekuparadzaniswa kwako.
Pasi pemamiriro ezvinhu anopesana ehupenyu hwakarasika, vakadzvinyirirwa vanoona kurambwa zvine musoro kwenzvimbo inotyisa inogara izvozvi. Panyaya iyi, munyori anoti: "... kunyangadza, tsitsi uye kutya kwaive manzwiro ayo muoni wedu anga asisagone kunzwa.
Chikamu chechitatu - chakanyanya kwepfungwa - chinotaura nyika yezvidzidzo mushure mekusunungurwa. Pano, munyori anoedza kutora mafungiro evaya vakanunurwa, avo vanotambura nerudzi rwekusadzivirirwa hunhu nekuda kwezvavakaona. Ivo vapenyu vanova vanhu vakasiyana zvakanyanya, ivo vanowana imwe nhanho yekutya, kutambura, rusununguko uye mutoro.
Murume Ari Kutsvaga ...
Kuchenjerera kwepfungwa (1995), naDaniel Goleman
Iri bhuku rakaburitswa pakati-pema90 rakaita munyori waro mukurumbira pasirese nekuburitsa runyorwa kutaridzika kwechivanhu pfungwa yehungwaru Chikumbiro chaGoleman ndechekupa nzvimbo yakakosha kune manzwiro emunhu mukati medunhu repfungwa.. Nekudaro, kuomerera kwake pakuyananisa pakati pehungwaru uye Ndakavafadzakuburikidza nekudzidza kwehuropi uye nharaunda nharaunda.
Kuti ushandise hungwaru hwepamoyo zvinodikanwa kutsvaga chiyero zvichibva pane kufunga kwepfungwa kwakabatanidzwa kune (kunzwisiswa) kukosha kwemanzwiro. Saizvozvo, munyori anosimbisa kuti hazvisi zvekuramba kana kuyedza kubvisa manzwiro evanhu.
Panguva ino, chinhu chakakosha ndechekunzwisisa manzwiro mukati memapuraneti akasiyana emunhu (pachedu, mhuri uye nyanzvi). Kuonekwa seizvi, Pfungwa yakataurwa naGoleman inoburitsa pachena kukosha kwekuzviziva iwe pachako zvakanyanya uye zvirinani, kuti uwane hupenyu huri nani.
Maumbirwo, chinangwa uye mutauro
Aimbove purofesa we Harvard mapurojekiti mashanu makuru hunyanzvi kukura kuburikidza nehungwaru hwepamoyo. Izvi ndeizvi: kuzviziva, kutonga kwemanzwiro, kukurudzira mukati, kunzwira tsitsi uye kugarisana. Iko kunonzwisisika pfungwa nyowani yehungwaru - kwete iyo yega - nekucherechedzwa kweanoteerera uye ane hukama nedivi remunhu sechinhu chinogadzirisa.
Nekudaro, imwe nzira inopihwa kuchinhu kuti ararame uye agarisane naye pamwe nevamwe. Chekupedzisira, bhuku iri rinogona kunzwisiswa maererano nenzira yakasarudzika yepfungwa. Nepo mutauro wakashandiswa uchirerutsa nzwisiso yeruzhinji.
Pfungwa kutaura (2016), naAdrián Triglia, Bertrand Regader naJonathan García-Allen
Kuti upinde munyika yepfungwa, nzira yakajeka inokosha, asi kure nedzidziso dzakaoma kana pfungwa. Ichi ndicho chirevo chevanyori ve Pfungwa kutaura, chinyorwa chine muongororwo wakakura wepfungwa iyo ine kudzokorodza kubva kwayakatangira kusvika nhasi.
Naizvozvo icho chinhu chakakodzera kudzidza uye, panguva imwe chete, icho chinobvumira kuverenga nekutamba kana zvisina kurongwa. Saizvozvowo, kuvandudzwa kwechinyorwa kunomutsa mibvunzo yakadai sey: chii chinonzi psychology? kana kuti psychology sainzi mune yakasimba pfungwa yezwi iri? Nezvikonzero izvi, ibhuku rakakodzera kutanga muruzivo rwechirango ichi.
Kusimba kwesainzi uye mutauro
Vanyori vanokwanisa kuchengetedza hukasha hwesainzi pamwe nemutauro uri nyore kunzwisisa kune ese marudzi evaverengi. Zvakaenzana, tsananguro dzedzidziso dzinotsanangura zvine mutsindo zvikoro zvakasiyana zvechirango ichi pamwe chete nevanofunga zvikuru pamwe chete nekufambira mberi kunoshamisa uye zvakawanikwa.
Ukuwo, bhuku rinosanganisira etymological shanduko yemamwe mazwi. Asi haisi chete mazita emazita nemafungiro, nekuti muzvinyorwa zvese vanyori vanotaura zvavanotaura nezvenyaya iyi. Imwe yeaya maonero anofambidzana neakowo enzanisa ongororo. yemafungiro akakosha epfungwa.
Iyo mbiri chinangwa chevanyori
Pfungwa kutaura inoongorora hukama hwepakati pakati pehunhu hwevanhu nekushanda kwehuropi sechinhu chekubereka uye chepfungwa. Saka, chinonyanya kukosha chevanyori kuve nekuwana musanganiswa usingawanzoitika mumabhuku esainzi: inovavarira kudzidzisa pamwe nekuparadzira nerunyararo.
Mamwe mabhuku akakurudzirwa epfungwa
Kuteerera chiremera (1974), naStanley Milgram.
Zvakaipa zvako nzvimbo (1976) naWayne Dyer.
Kuda kana kuvimba (1999), naWalter Riso.
Maitiro aRusifa (2007), naPhillip Zimbardo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Mabhuku epamusoro epfungwa
Rwiyo rweMio Cid